Abasebenza kubakhenkethi eIndiya: Uyiphumeza njani i-US $ 400 yezigidigidi kumazwe angaphandle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » Abasebenza kubakhenkethi eIndiya: Uyiphumeza njani i-US $ 400 yezigidigidi kumazwe angaphandle
Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Abaqhubi bezokhenketho eIndiya kwintlanganiso yabaphathiswa
Inani leengcebiso zanikwa nguMbutho waseIndiya wabaSebenzi boKhenketho (IATO) kwintlanganiso eyabizwa nguMphathiswa Wezorhwebo noShishino, uShri Piyush Goyal, ukufumana igalelo kubathumeli kumazwe angaphandle ngamanyathelo afanelekileyo aza kuthathwa kubizo lweNkulumbuso ukonyusa ukuthunyelwa kwelinye ilizwe. ukuya kwi-US $ 400 yezigidigidi kulo nyaka kwaye isisa i-India kwi-US $ 5 yezigidi zezigidi kuqoqosho kwikamva.
Amanyathelo okuvula ii-visa zabakhenkethi kunye nokuqala kwakhona kokusebenza kwenqwelomoya kwilizwe liphezulu kuluhlu.
Kukwaceliwe ukuba iiNkonzo zokuThunyelwa kwelinye ilizwe ezivela eIndiya kufuneka ziqhubeke kule minyaka mihlanu izayo kwaye zibandakanywe kwiskimu seRoDTEP kumgaqo-nkqubo wezorhwebo lwangaphandle.
Iskimu sijolise ekubuyiseleni abathumeli bamanye amazwe, iirhafu, iirhafu, kunye neerhafu ezihlawulwe kubo kwinqanaba eliphakathi, likarhulumente nakwingingqi.
Emele ishishini lezokhenketho, uRajiv Mehra, uMongameli we Umbutho wamaIndiya wabaSebenzi boKhenketho (IATO), amanyathelo acetyiswayo njengokuvula ii-visa zabakhenkethi, ukuqala kwakhona imisebenzi yesiqhelo yenqwelomoya, njl.njl. Ukwazisile noMphathiswa malunga nemeko yemeko yezemali abathe bayifumana ngexesha lobhubhane kunye nokukhululwa kwe-SEIS ekudala ilindelwe Scheme Scheme) kunyaka-mali ka-2019-20 ubalulekile ekusindeni kwabo.
Umnumzana Mehra wongeze isicelo sokuba ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kwinkonzo ezivela eIndiya kufuneka ziqhubeke kule minyaka mihlanu izayo kwaye kufuneka zibandakanywe kwiskimu seRoDTEP kumgaqo-nkqubo wezorhwebo lwangaphandle olwenziwe ngo-5-2021. Iskimu esi sijolise ekubuyiseleni abathumeli mpahla ngaphandle, uxanduva, iirhafu, kunye neerhafu ezihlawulwe kubo kwinqanaba eliphakathi, likarhulumente nakwingingqi, kwaye igubungela isibini kwisithathu, iipesenti ezingama-26 zokuthunyelwa kwelinye ilizwe kweli lizwe.
UMongameli we-IATO ukwathe kuMphathiswa ukuba ishishini lokhenketho ngoyena mntu uhola kakhulu kunaniselwano lwangaphandle kwaye ngenxa yoko kufuneka anikwe iwonga lokuthathwa njengomthumeli kumazwe angaphandle ngokulingana nabantu abafumana iinkonzo kumazwe angaphandle. Elo nyathelo linokuphucula ukhuphiswano lwabo lokuhambela amazwe angabamelwane kwaye ke oko kunokubonyusa abafikayo bamanye amazwe, watsho.
Ngaphaya koko, kwathiwa uMphathiswa wezoRhwebo noShishino we-Union ukuba kuphunyezwe umthetho we-Integrated Goods and Services Tax (IGST) apho abakhenkethi abashiya i-India benelungelo lokubuyiselwa imali ye-IGST ehlawulwe e-India kwimpahla ekhutshwe e-India. phantsi kweskim sokubuyiselwa kweRhafu kubakhenkethi (TRT).
Utshilo uMnu. Mehra, “Ngokwenqanaba elikhulu, i-India inamandla amakhulu okhenketho, kodwa ukufikelela apho sidinga inkxaso kurhulumente malunga nenkuthazo yezemali kunye nokuphuculwa kwezakhiwo. Ngorhulumente ojolise ekuphuculeni umtsalane eIndiya, ndiqinisekile ukuba sizakubona ukunyuka ngendlela esingazange sayibona ngaphambili. ”